Diki Bhizinesi Accelerator | Bob Prosen
Muvhuro, Ndira 24, 2011 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Makore mashoma apfuura, ndakaverenga uye ndakanyatsonakidzwa Tsananguro Dzidziso Zvakanaka, bhuku rinobva kuna Bob Prosen iro rinopa rairo yakanaka kumabhizinesi. Hutungamiri hwebhizinesi raBob uye zvirongwa zvekudzidzisa manejimendi zvakawedzera zvakanyanya mashandiro uye purofiti uye zvakachinja tsika kuSaber, Hitachi, Sprint, AT & T nemazana emabhizimusi madiki munyika.
Kubvunza uye kudzidziswa kwaBob izvozvi kuri kudiwa zvakanyanya - heino chikamu chazvino kubva kuMSNBC:
Wese munhu anogara achibvunza maitiro ekukurumidza kuwedzera kuita uye purofiti mumabhizinesi avo. Zvinotaridza kuti munhu wese anoda kuziva marongero chaiwo aanotora ekukudza kutengesa kwako, kudzikisa mubhadharo wevashandi uye kuwedzera purofiti yako zvisinei nemamiriro ehupfumi. Ndakaendesa akawanda emazano akapihwa naBob kubva paakatanga bhizinesi rangu uye bhizinesi riri kubudirira.
Bob neni takaramba tichitaurirana uye akasvikira kusimudzira ino yakakosha yekudzidzira nhevedzano (Anowanzo bhadharisa madhora zviuru gumi zverudzi urwu rwechinhu, asi arikuda mhinduro pachirongwa.)
Muizvi yemahara webinar Bob achakudzidzisa iwe pachako:
Kuisa zvinangwa "zvakanaka" zvezvikamu zvitatu zvakakosha zvebhizinesi rako.
Iwo akanyanya kukosha metric ebhizinesi anozokugonesa kuzadzisa zvinangwa zvako.
Maitiro ekuongorora hutungamiri hwako pachako. Iwe unayo here izvo zvinotora kutungamira sangano rako kuti riwane zvisinganzwisisike purofiti?
Zvekare, ingoshanyira saiti ku tarisa iyo vhidhiyo yekudzidziswa. Mushure mekutarisa iko kudzidziswa ita shuwa kuti iwe unosvika pane yekutanga Bob runyorwa kuti uziviswe kana chirongwa ichi chekubudirira chave kuwanikwa. Ndizvozvo, ndinovimba unonakidzwa nekudzidziswa!
PS: Pazasi pevhidhiyo unogona kurodha pasi mamwe mabhonasi akakosha uye nekutaura pamusoro pekudzidziswa.
Tags: analytics mushandirapamwe wekuteverakutsvaga kwevhidhiyoKushambadzira Mabhukunharembozha yekutengesa
Wedzera kugadzirwa kweemail neinternet mode